ကျောက်ဖြူ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြီးမြောက်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက်
ဒုတိယအကြိမ်ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ရန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံပေကျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် ၂ဝ၁၉ ဧပြီလ ၂၈ ရက် နေ့လည်တွင် ပေကျင်းမြို့ Shangrila Hotel တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျောက်ဖြူ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ညှိုနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြီးမြောက်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန့်စင်မောင် ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးMr. Hong Liang ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးစိုးသိန်း ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်မိမိခိုင်နှင့် မြန်မာသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ Power Construction Corporation of China ၏ ဥက္ကဌ Mr.Sun Hongshuiနှင့် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး အသိအမှတ် ပြုစာချွန်လွှာအား Power China Resources Ltd (SINOHYDRO) ၏ ဥက္ကဌMr. Sheng Yuming နှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် Supreme Trading Company Limited ၏ ဥက္ကဌဒေါက်တာစိန်မြင့် တို့မှ ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးသစ်လင်းအုန်းနှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီး Mr. Hong Liangတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။